पत्रपत्रिका – Page2– आफ्नो समाचार
भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ३२.१८ प्रतिशत असफल
Afno News — १० पुष २०७५, मंगलवार ०८:४२0comment
काठमाडौँ । विभिन्न किमिसका भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२.१८ प्रतिशत असफलता पाएको छ । विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये गत वर्षको फैसलाअनुसार ६७.८२ प्रतिशतमा...	Read more »
Afno News — १ पुष २०७५, आईतवार ०८:०८0comment
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजनलगत्तै कम्तीमा १४ हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गरी विशेष कार्ययोजना तयार पारेको खबर अाजकाे राजधानी दैनिकले छापेकाे छ । संघीय मामिला तथा...	Read more »
Afno News — २९ मंसिर २०७५, शनिबार ०८:५१0comment
चितवन । प्रदीप चेपाङले तीन कक्षा पास गरिसके तर चार कक्षा पुगेका छैनन् । अहिले पनि तीन कक्षामै पढ्छन् । पुरानै किताब सुमसुम्याउँछन् । इच्छाकामना गाउँपालिका...	Read more »
Afno News — १६ मंसिर २०७५, आईतवार १०:३१0comment
मंसिर १६, २०७५ काठमाडौं — स्थानीय तह प्रदेश सरकारमा समायोजन हुने कर्मचारीले समेत संघीय निजामति सेवाको मुख्य सचिव र सचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी अध्यादेश जारी...	Read more »
अब कमाइको १० प्रतिशत बाआमालाई दिनुपर्ने प्रावधान
Afno News — २६ कार्तिक २०७५, सोमबार ०८:१६0comment
काठमाडौं / तपाई सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छ ? अनि आमाबाको लालनपालनको दायित्वबाट पन्छिनुभएको त छैन ? अब भने कानुनले नै तपाईलाई जिम्मेवार बनाउँदै...	Read more »
भक्तपुर । घरमा टेलिभिजन, फ्रिज, पंखा, हिटरजस्ता बढी बिजुली खपत गर्ने सामान प्रयोग भइरहे पनि मिटरमा कम खपत देखाएकाे भए सचेत हुनुपर्ने बेला अाएकाे छ। नेपाल...	Read more »
Afno News — ११ कार्तिक २०७५, आईतवार ०९:१७0comment
काठमाडौं / क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण, सांसदबाट महिनैपिच्छे काटिने लेबीबाट चल्दै आएको कांग्रेसको आर्थिक कोषमा मनपरी चलेको छ । महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको...	Read more »
Afno News — ४ कार्तिक २०७५, आईतवार ०९:४९0comment
काठमाडाैँ । नेपाल आयल निगमले तत्काल इन्धनको मूल्य नबढाउने भएको छ । निगमले चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई लक्षित गरेर इन्धनको मूल्य नबढाउने भएको हो । संसद्को उद्योग...	Read more »
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने भएका छन्। सरकारमा रहेकी केही मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति चौतर्फी गुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सो गुनासोलाई सम्बोधन...	Read more »
Afno News — १ आश्विन २०७५, सोमबार ०८:४७0comment
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार ४५ दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ४२ महिलामाथि बलात्कार तथा बलात्कारका प्रयास भएको उजुरी परेको छ। साउन १ देखि भदौ २५...	Read more »